မြတ်လေးငုံ: ၉မိုင် စက်မှုလယ်ယာ ငှာရမ်းမှုအကြောင်း အသိပေးခြင်း
အမှတ်၁ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ (၉မိုင် စက်မှုလယ်ယာ)ကို ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာ လောက်မှာ စက်ရုံကို ပုဂ္ဂလိက ငှားမယ်ဆိုပြီး သတင်းစာထဲထည်.ပါတယ်၊စတာက အဲဒီမှာတည်းက စတာပါ၊ဘုတ်အဖွဲ.က ဒီစက်ရုံဟာ နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးအမြတ် ရှိနေသလို တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်လည်း အထောက်အပံ.ကောင်းကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကန်.ကွက်ခဲ့ပေမယ်. ၀န်ကြီး တစ်ဦးတည်းရဲ. သဘောထားနဲ. ငှားမယ်ဆိုပြီးဖြစ်တာလို.သိရပါတယ်။ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကွက်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ် ။
သတင်းစာထဲမထည်.ခင် ခုလက်ရှိရသွားတဲ့ Young Investment Group (အင်းလျားကန် မျက်စောင်းထိုး ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ သူတို.ကားအလုပ်ရုံ ၇ှိပါတယ်)ကတာဝန်ရှိသူတွေက အဲဒီစက်ရုံကို အရင်ရောက်လာပြီး ဒီစက်ရုံငှားမလို. အဘကိုပြောထားပြီးသား ၀င်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးရောက်လာတာပါပဲ။ဆုံးဖြတ်ချက်တောင်မကျသေးတဲ့ စက်ရုံကိုငှားဖို.ပြောထားပြီးပြီ ဆိုတာကတော. ? ထပ်သေချာသွားတာကတော. တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ အဲဒီCompany ကို ငှားရမ်းခွင်.ပြုလိုက်ပါတယ်တဲ့၊ဒီ.ထက်ပို စိတ်ဝင်စားစရာက ဒီဝန်ကြီးဌာန အောက်မှာရှိတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းဆီသန်.စက်ရုံကိုလည်း ဒီ Company ပဲရသွားပါတယ်၊ ၀ါကြိတ်စက်ရုံတွေလည်း ဒီ Company ပဲရထားသလို ပျဉ်းမပင်ပန်ကာကြိုးစက်ရုံကလည်း ဒီ Company ပဲထင်ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်တာလား ပိုင်တာလားတော. စစ်ကြည့်မှသိမယ်ထင်ပါရဲ. ။
ခု ၉မိုင် စက်ရုံကိစ္စကလည်း အဲ့ဒီတည်းက ကြိုးစားနေပေမယ်. ရှေ.နေချုပ်ရုံးက ကန်.ကွက် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုဆက်နွယ်နေတဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန က ကန်.ကွက်နဲ.ပဲ အတော်အံ.အားသင်.ဖွယ်ရာ ကြိုးစားမှုတွေနဲ. အခုတော. အားလုံးကသဘောတူလိုက်ပါတယ်တဲ့။ကြိုတင် ရွေးချယ်ခိုင်းထားတဲ့ သဘောထားကောက်ချက်တွေအရ လူ ၁၇၀ ကျော်ရှိတဲ့ စက်ရုံမှာ လုပ်ပြီးကျန်ခဲ့မှာက ၁၆ ယောက်တဲ့ ။ဘာအာမခံချက်မှလည်း ရေရေရာရာမပေး ရှိပြီးသားဝန်ထမ်းတွေကျတော.လည်း ထုတ်လုပ်ရေး ပညာရှင်တွေကနေ စက်ပြင်သာသာ ဘ၀တွေ ရောက်ရပါတော.မယ်၊ ဒီလိုပညာရှင်တွေဖြစ်လာအောင်သင်ပေးခဲ့ရတဲ့စ၇ိတ်တွေက နိုင်ငံတော်စ၇ိတ်ဆိုပေမယ်. ပြည်သူ.ပိုက်ဆံတွေပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော. သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေဆီတိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်မယ်.နည်းလမ်း များလည်းအကြံပေးစေလိုပါတယ်။အတည်ပြုချက်မရတဲ့ သတင်းတွေအရတော.နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဆီကို တင်ပြရာမှာ စက်ရုံဟာအရှုံးပြနေတယ်ဆိုပြီး တင်ပါတယ်တဲ့။တကယ်က ဘယ်တုန်းကမှ မရှုံးခဲ့တဲ့စက်ရုံပါ။ဒါပေမယ်. ဒီလိုလုပ်ချင်တာကြောင်.လားတော. မသိပါဘူး။ ၁၀ လပိုင်းလောက်ကစပြီး လုပ်ငန်းတွေ ရှိလျှက်နဲ. ဘာဘတ်ဂျက် မှ ချမပေးတာကြောင်. ၀န်ထမ်းတွေငုတ်တုတ်ထိုင်နေရပါတယ်။ဒါမှအရှုံး ပြလို.ရမှာကြောင်.ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင်.ဒီကိစ္စတွေကို မရမ်းကုန်းလွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်မေ၀င်းမြင်. သိစေချင်သလို အခြားစောင်.ကြည်.ပေးမယ်.၊တရားဝင်လေ.လာရေးသားပေးမယ်. Media တွေလည်း သိစေချင်ပါတယ်၊ဒါကြောင်. ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ ကူညိပေးဖို.လည်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ခုတော. ၀န်ထမ်းမိသားစုတွေအားလုံးဟာ ဘယ်တော. လိုင်းခန်းတွေပေါ်က ဖယ်ရတော.မလဲ၊ဘယ်တော.ပြောင်းရတော့မှာလည်း၊ဘယ်တော့ထွက်ရတော့မှာလည်း၊ပင်စင်ကလည်း မသေချာ၊ဆက်လုပ်ရအောင်ကလည်း ဘာအာမခံချက်မှမရှိ (ဘာလို.လည်းဆိုတော. ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၅ လပိုင်းတည်းကလွှဲလိုက်ရတဲ့ ပန်ကာကြိုးစက်ရုံကို ဒီတိုင်းပစ်ထားပြီး ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်း ၁၀ယောက်လောက်(အရင်က ရာဂဏန်းရှိပါတယ်) ကိုလစာပေးထားပြီး စက်ရုံကို ဒီတိုင်းထားထားသလို သင်္ဃန်းကျွန်း ဆီသန့်စက်ရုံဆိုလည်း စက်ပစ္စည်းတွေ ဖြုတ်ပြီးရောင်း တော.မယ်. ။
နောက်တစ်ခုက လေ့လာမိသလောက် လွှတ်တော်မှာ ပုဂ္ဂလိက လွှဲပြီးသွားရင် စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်းတွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိ/မရှိ ဆန်းစစ်တဲ့ ကော်မတီ တစ်ရပ်ရှိတယ်လို.ပြောပါတယ်၊ဒီကော်မတီအနေနဲ့လည်း အချက်အလက်တွေမြင်သာထင်သာစောင့်
ကြည့် ထုတ်ပြန် ပေးစေချင်ပါတယ်၊ ခုဒီ လူ၂၀၀ နီးပါး စက်ရုံကြီးကို လူ၁၆ ယောက်နဲ. ဘာတွေဘယ်လိုဆက်ထုတ်မလဲသိချင်တာပါ၊ စာချုပ်စည်းကမ်းမှာ မူလထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ရမယ်လို.ပါပါတယ်တဲ့။ကျွန်မတို.က၀န်ထမ်း မိသားစုမို့ ဒီနေရာက မသွားချင်တာမျိုးပေမယ်. နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိရင်တော. ဖြေသာပါတယ်၊ ၀န်ထမ်းတွေသာပြုတ်သွား၊စက်ရုံကြီး ကျတော.ပိတ်ထား၊သူတို. အကျိုးအမြတ်သက်သက်အတွက် အချိန်တွေရင်းပြီး အခြားရည်ရွယ်ချက်နဲ. ငှားထားကြတာမျိုးဆိုရင်တော. မဖြစ်သင့်ပါဘူး၊ခုဒီစက်ရုံကို တစ်လ သိန်း ၅၀၀ နဲ.ငှားတယ်လို.သိရပါတယ်..အကျယ်အ၀န်း၁၀ ဧက ကျော်ရှိပြီး ပြည်လမ်းမကြီးဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ဒီနေရာ၊အထဲမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့စက်အားလုံး အနေအထားနဲ. ဒီနှုန်းဟာ ရသင့်တဲ့အနေအထားဟုတ်/မဟုတ်လေ့လာသင့်ကြသလို နောက်ပိုင်းဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်/မလုပ် လည်းစောင်.ကြည်.စေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေသတစ်ခုမှာ ဓလေ.ကျပေါက် ပျဉ်း ကတိုးတွေ ခုတ်ယူချင်တာနဲ. ရော်ဘာ စိုက်ပျိုးရေး မြေတွေလျှောက်၊ပြီးတော.ပစ်ထား၊ဒီလိုပဲ နေပြည်တော်အမြန်လမ်း တစ်လျှောက် မြေလိုချင်တာနဲ့ ကျွန်းကွက်တွေလျှောက်၊လမ်းဘေးလောက်ပဲ ဟန်ပြစိုက်ပြထားပြီး အခြေအနေတစ်ရပ်၊အချိန်အခါ တစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများ ဆိုတာရှိခဲ့ ရှိနေဆဲပါရှင်၊ ပြီးတော. ဒီ Company က အာမခံလုပ်ငန်းလည်း လေလံအောင်ထားတယ်လို.သိရပါတယ် ။သိန်းပေါင်းသောင်းချီသွင်းရတဲ့ လုပ်ငန်းပါ ၊ဒါအပြင် စက်ရုံတွေလေလံဆွဲထားပြီး မလည်ပတ်ပဲ လစာတွေရော ဘာအကြောင်းနဲ. ပေးနေ၊ပေးနေနိုင်တာပါလဲ၊နိုင်ငံတော်ရဲ. ၀င်ငွေခွန် တန်းစီဇယားထဲမှာရော ဒီ Company ကဘယ်နေရာမှာပါနေပါသလဲရှင် ၊ ဒါအပြင် တကယ်. ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားပိုင် ဟုတ်/မဟုတ် မဟုတ်ရင်လည်း ဘယ်သူတွေ ဘယ်ငံညခားသားတွေ က ကျောထောက်နောက် ခံပေးထားတယ် ဆိုတာတွေက သေချာ ဆန်းစစ်ဝိုင်းဝန်း စောင့်ကြည့်သင့် တယ် ထင်ပါ တယ်၊တကယ်တော. လက်ရှိလေလံပစ်တယ်၊ပုဂ္ဂလိက လွှဲတယ်ဆိုတာတွေက ဘယ်သူတွေ လာလေလံဆွဲတယ်၊ဘယ်လောက်တွေနဲ့ဆွဲတယ်၊ဒါကြောင်. ဘယ်သူ့ကို ခွင့်ပြုလိုက်တယ်၊စာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းတွေက ဘာတွေဆိုတာက သမ္မတ ကြီးပြောလေ့ရှိတဲ့ မိဘပြည်သူ အပေါင်းကို ချပြရမှာ မဟုတ်ဘူးလားရှင်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းဖြန့်ချိနိုင်သူများဖြန့် ချီပေး၊စောင့်ကြည်နိုင်သူများ က စောင့်ကြည့်ပေး၊ရေးသားနိုင်သူများက ရေးသားပေး ဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင်။
ဒီလိုပုဂ္ဂလိ က အမည်ခံ တွေဆီကို ရုတ်ချည်းလွှဲပြောင်းမှုတွေကြောင်. ကျွန်မတို.ရှေ.မှာ နစ်နာခဲ့ရတဲ့ ပညာရှင်တွေ ၊ ၀န်ထမ်းတွေ ရှိခဲ့ပြီးသလို ကျွန်မတို.လည်း ကြုံရတော့မှာပါ၊ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်ဘယ်သူမှ ထပ်မကြုံစေချင်လို့ပါ၊ တစ်ချို့တွေပြောသလို အစိုးရက တစ်ဝက်တစ်ပျက် ထိမ်းပေး၊ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေလည်း စိတ်ချရပြီ အခြေတည်နိုင်ပြီဆိုမှ လုံးလုံးလွှဲလိုက်ရင် ရှဉ်.ရော ပျားရော စိတ်ချမ်းသာစရာလေးဖြစ်မှာမှို.ပါရှင်။အားလုံးပဲ တတ်နိုင်သူများ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးကြပါအုံးရှင်။ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို.ကတော့စက်ရုံက ဘယ်ဝန်ထမ်းကိုမဆို မေးလို့ရပါတယ်။
ကျွန်မတို့အဖို့တော့ ဒီစက်ရုံကို စွန့်ခွာရဖို့ အချိန် သိပ်မကျန်တော.ပေမယ်. နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းတွေ ဒီလိုမဖြစ်စေချင်တာပါ။ခုလို ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အလုပ်ရပ်နားသွားခဲ့ကြရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲတော့ မသိပါဘူး။ကျွန်မတို့ကတော့ ကိုယ်နဲ့ဆက်စပ်တာလောက်ပဲသိတာမို. ဥပမာ အင်းကုန်း စက်ရုံကြီးလည်း ဒီလိုပဲခံလိုက်ရပြီး ခုတော.ဟုတ်တိပတ်တိ ဘာမှမလုပ်ပဲ ၀န်ထမ်းတွေအလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်၊ငံတော်အတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေရနေတယ် ဆိုပေမယ်. အဲ့ဒီလို လွှဲယူပြီး ရပ်နားထားလို့ ကျဆင်းသွားတဲ့ ထုတ်လုပ်ရေး အင်အား စုတွေ၊ရပ်နားလိုက်ရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ၊ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွဲယူပြီး ရပ်နားထားတယ် ဆိုတာတွေ၊ ဒီလောက်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုတောင် တစ်ပတ်အတွင်း ပွင်းလင်းမြင်သာမှု မရှိပဲငှားလိုက် တယ်(ရှေ့နေချုပ်ရုံးကကန်.ကွက်လို့သာစာချုပ်က ခုမှချုပ်ရမှာပါ)ဆိုတာတွေကိုစောင့်ကြည့် နိုင်သူ များစောင်.ကြည့်ပေးစေချင်တာပါ။
ဇန်န၀ါရီ ၈ ရက်နေ့ကတော့ စက်ရုံမြေ တစ်ခုလုံး တိုင်းတာပြီး အဲဒီနေ. ဒါမှမဟုတ်နောက်နေ.မှာ ဂရံသွားလျှောက်မယ်လို.သိရပါတယ်။စာချုပ်ချုပ်ဖို့ ဂရံမရှိရင် ရှေ့နေချုပ်ရုံးက ခွင့်မပြုတာမို့လျှောက်ရ တယ်လို.သိရပါတယ်။ဒီနေ(၂၄-၁-၂၀၁၃)မှာတော့ကုမ္ပဏီ နဲ့ စာချုပ်ချုပ် မယ်လို့သိရပါတယ်၊ အားလုံးသိရှိစောင်.ကြည့်နိုင်ရန်ပါ၊အစပိုင်းက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးနဲ. မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာ ကို ၃၀-၁၂-၂၀၁၂ နေ့က သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်တဲ့၊
ဒါပေမယ်.ဂရံတော့မရသေးဘူးလို.ကြားရပါတယ် မည်သည့်ကဏ္ဍ အတွက်ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်ရန်ပါရှင်...။